[Chronicle] အယ်လ်ဂျီးရီးယားတရားစီရင်ရေးစနစ်သည် Khaled Drareni ကိုသင်္ကေတအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည် - Jeune Afrique - TELES RELAY
[Chronicle] အယ်လ်ဂျီးရီးယားတရားစီရင်ရေးစနစ်သည် Khaled Drareni ကို Jeune Afrique အဖြစ်သင်္ကေတအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်
By Tele RELAY တစ်ခု On သြဂုတ်လ 11, 2020
ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်ကျခံရပြီးအယ်လ်ဂျီးရီးယားမှသတင်းထောက်နှင့် RSF မှကိုယ်စားလှယ်များသည်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်လူ့အခွင့်အရေးတိုက်ဖျက်ရေးတွင်အထင်ကရဖြစ်လာသည်။
အယ်လ်ဂျီးရီးယားသတင်းထောက်ကိုထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ချမှတ်လိုက်သည်။ သူ၏တိုင်းပြည်သည်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှပြစ်တင်ရှုတ်ချခံရသည်။ သူသည်တရားမျှတမှုလွတ်လပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာတို့၏အငြင်းပွားမှုများကိုဆွဲထုတ်ရန်ကျန်နေသည်။
ဂရိနတ်ဘုရားမ Themis ၏မျက်မမြင်မျက်လုံးများကသက်သေပြသကဲ့သို့တရားမျှတမှုသည်အလုပ်အကိုင်အရမျက်စိကန်းသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများ၊ စစ်သွေးကြွများနှင့်ရုပ်ပုံများတွက်ချက်မှုများမှလွတ်မြောက်ရန်ဖြစ်သည်။
သို့သော် Khaled Drareni အားထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်အပြစ်ပေးခံရပြီးနောက်မီဒီယာဒေါသအရှိန်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါအယ်ဂျီးရီးယားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်များသည်အလွန်မိုက်မဲနေသလား။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချခံရသူများ၏လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမီဒီယာပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်အစိုးရရှေ့နေကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
ယခုတနင်္လာနေ့တွင်၊ “ လက်နက်မဲ့စုဝေးမှုကိုလှုံ့ဆော်မှု” နှင့်“ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း” အတွက်ကြောင့်ပြင်းထန်သောစီရင်ချက်သည်ရုပ်သံလိုင်း၏သတင်းထောက်သတင်းထောက်အပေါ်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
Television Tv5 Monde နှင့်နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့ (RSF) ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဥရောပအသင်းအဖွဲ့ကဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အနောက်တိုင်းစာနယ်ဇင်းအဖွဲ့အစည်းကစုစုပေါင်းကိုယ်ခံစွမ်းအားဖွဲ့စည်းလို့မရပါဘူး။
သို့သော်တရားစီရင်ရေးစနစ်သည်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၏ရှေ့နေ Nouredine Benissad ပြောဆိုသကဲ့သို့“ အချည်းနှီး” ဖြစ်နေပါကကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းကြောင့်ပြည်သူလူထုဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုနိုးထစေနိုင်သည့်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ချက်သည်မကောင်းပေလော။
၀ ါကျ၏ပြင်းထန်မှုသည်ဤ Hirak ကိုမည်သူနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြသည် Khaled Drareni သည်အလင်းရောင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်မှန်ကန်စွာဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်... လူကြိုက်များသောဆန္ဒပြမှုကိုတရားမ ၀ င်ဟုယူဆပြီးအယ်ဒီတာ၏ထောင့်များသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအနေအထားကိုသစ္စာဖောက်သော်လည်း၊
ဤအချက်သည်ပါဝါနှင့်စာနယ်ဇင်းများအကြားဆက်နွယ်မှုနှင့်မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည် - သတင်းဆောင်းပါး၏“ ဓာတ်ပုံဆရာ” သတင်းသမားသည်ဖုံးကွယ်ထားသည့်မကျေနပ်မှုအတွက်ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်ရှုတ်ချခြင်းခံရပြီးနောက်ဆုံးတွင်အကြောင်းပြချက်အဖြစ်စွပ်စွဲခံရသည်။
နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်မှုသည်ဥပဒေအရအရေးယူခြင်းထက်မဟာဗျူဟာကျသောတွက်ချက်ခြင်းကိစ္စထက်ပိုသောကြောင့်အယ်လ်ဂျီးရီးယားအစိုးရမှ Khaled Drareni ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဖိနှိပ်ခြင်းသည်သာမိုမီတာကိုချိုးဖဲ့ရုံမျှသာမဟုတ်ကြောင်းနားလည်ရမည် Hirak အဖျား။ ၎င်းသည်အခြား ပို၍ စစ်သွေးကြွများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသာမိုမီတာများမြင့်တက်လာသည်ကိုမြင်တွေ့ရခြင်း၏အာမခံချက်ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာနှင့်တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏အငြင်းပွားမှုများတွင်တောင်မှနိုင်ငံရေးအင်အားကြီးများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသံဘုတ်အဖွဲ့ကိုသူတို့ယုံကြည်စေလိုသည်ထက် ပို၍ အာရုံမခံစားကြပါ။
မတ်လ ၂၉ ရက်မှစ၍ နှုတ်ဆိတ်သွားစေပြီး Drareni ၏အသံသည်ဘယ်တော့မျှနားမကြားနိုင်တော့။ သမ္မတ Bouteflika ထွက်ခွာသွားချိန် မှစ၍ အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားများ၏လွတ်လပ်ခွင့်သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်သည် "ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်း" သို့ရောက်ရှိနေကြောင်းသူ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်သတိပေးချက်များကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Abdelkrim Zeghileche (သို့) Ali Djamel Toubal - လပေါင်းများစွာအတွင်းမှာအခြားသတင်းထောက်များဟာ "နိုင်ငံခြားပါတီများ" နှင့်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား (သို့) ထောက်လှမ်းရေးများ၏ခြိမ်းခြောက်မှုကဲ့သို့ကြီးမားတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြတာပါ။
ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့်သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေးများကိုတစိတ်တပိုင်းမျှဝေခြင်းကအာဏာရှင်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်စွပ်စွဲချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်ပါသလား။ မျက်မမြင်တရားမျှတမှုသည်နိုင်ငံရေးအာဏာ၏တီးတိုးများကိုအမြဲတမ်းနားမကြားနိုင်ပါ။ အဂတိလိုက်စားမှုနှင့်မညီမှုသည်အယ်လ်ဂျီးရီးယားတရားစီရင်ရေးစနစ်သည် Khaled Drareni ကိုအမှတ်အသားအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။
တိုဂို - ၀ န်ကြီးချုပ်ရာထူးမှအမျိုးသမီးတစ် ဦး
ဘယ်လ်ဂျီယံ - မာ့ခ်ဗန်ရန့်စ်ကတွစ်တာခေါ်ဆိုရန်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ - ပြီးခဲ့သည့် ၄၈ နာရီအတွင်းရူပီး ၁၀.၅၃ တန်ဖိုးရှိစပါး၊ MSP ၀ ယ်နေသည် ...
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား Jeune Afrique
Tele RELAY တစ်ခု 24390 ရေးသားချက်များ 1 မှတ်ချက်များ
ကင်မရွန်း - Paul Biya သည်တရားစီရင်ရေးစနစ်အတွင်းရှိ Jeune Afrique တွင်ကျယ်ပြန့်သောလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံခဲ့သည်
လက်ဘနွန် - Jeune Afrique ၏အမျက်ဒေါသကိုငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းထားရန်အစိုးရ၏နုတ်ထွက်မှုသည်မလုံလောက်ပါ
တိုဂို - ၀ န်ကြီးချုပ်ရာထူးမှအမျိုးသမီးတစ် ဦး၊ တိုင်းပြည်၏သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်
ဘယ်လ်ဂျီယံ - Marc Van Ranst သည်လက်နက်မချရန်တွစ်တာတစ်စောင်တင်သွင်းခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ - ပြီးခဲ့သည့် ၄၈ နာရီအတွင်းရူပီး ၁၀.၅၃ တန်ဖိုးရှိစပါး၊ MSP ၀ ယ်ယူမှုအားလုံးတွင်စတင်သည်။
တောင်အာဖရိက - ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၏လစာကိုဆိုင်းငံ့ထား
မိတ်ကပ်မပါဘဲ "ဝေးစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအနေဖြင့်" Vanessa Paradis ...
xnxx: ဤတွင်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားပြောပြရန်ရဲရင့်သောအချက် ၃ ချက် ...
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံသည်ဟန်ချက်ညီစွာကစားနေသည် - Jeune Afrique
Nick Cordero ကွယ်လွန်ခြင်း - သူ့ဇနီးကိုဘာတွေပြောချင်တာလဲ ...
LIVE Transfer Talk အာဆင်နယ်အသင်းဟာချယ်လ်ဆီးအသင်း၏ Jorginho သို့ပြောင်းရွှေ့ကစားခြင်းဖြစ်သည်
Daphné Njie ၏ဘဝကိုမျှဝေသူကိုရှာဖွေပါ (ဗီဒီယို)
အယ်လ်ဂျီးရီးယား - Bouteflika သည်Israelသရေလလူမျိုးနှင့်စကားပြောဆိုလိုသည့်အချိန် - လူငယ်…
Alicia Keys က“ ငါဟာပြည့်တန်ဆာတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။
Vanessa Paradis ကသူမရဲ့စေ့စပ်ထားသူTimothée Chalamet ကို "တန်ဖိုးထားပါတယ်"
Coronavirus: အာဖရိကသုတေသနကို WHO ကအားပေးတယ်
Vanessa Paradis ကို paparazzi မှကာကွယ်ရန်ဂျက်ဒီပက်သည်အလွန်ကောင်းလိုက်တာ! - …
xnxx: rake ပြီးတဲ့နောက်မျက်နှာကိုစောင့်ရှောက်ရန် message ၁၅ ခု
Angry FC ဘာစီလိုနာအသင်း၏တိုက်စစ်အား ...
10 ခုနိုးနိုးကွားကွားပွောငျးလဲမှုမြား .. !! حالاتجديدة !!